Wasiiradda arrimaha dibedda Soomaaliya iyo Ingiriiska oo ku kulmay London
Home Diaspora Wasiiradda arrimaha dibedda Soomaaliya iyo Ingiriiska oo ku kulmay London
Xoghayaha arrimaha dibedda Ingiriiska William Hague ayaa maanta oo khamiis ah xafiiskiisa ku qaabilsay raysul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo booqasho ku joogta dalka Britain.
Kulankan oo ka dhacay xafiiska arrimaha dibedda Britain ayaa labada dhinaca la sheegay in ay kaga hadlen dhinacyada ay ka wada shaqeyn doonaan Soomaaliya iyo Ingiriiska.
Xoghayaha arrimaha dibedda Britain William Hague ayaa ku sheegay bartiisa Internetka in UK ay saaxiib xooggan la tahay Soomaaliya isla markaana ay laba laabi doonto taageerada loo raadinaayo Soomaaliya ee ah tan muuqata ay siinayaan Soomaaliya sannadkan 2013-ka.
William Hague ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ay taageertay qorshaha Britain iyo waddamada kale ee ku G8 ee looga hortgayo kufsiga ka dhaca goobaha collaadduhu ay ka jiraan.
Labada mas’uul ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyo ballaarinta kaalmada Britian ay siiso Soomaaliya.
Waxaa kaloo lagu soo warramayaa inay isla soo qaadi doonaan shir dowladda Ingiriiska ay marti-gelin doonto bisha May ee sanadkan kaas oo looga hadlayo wixii ka qabsoomay shirkii London ka dhacay bishii February ee sanadkii la soo dhaafay.
Waa markii ugu horreysay oo dowladda Ingiriiska ay qaabisho wasiir ka socda dowladda Soomaaliya oo rasmi ah, tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe 1991-dii.